Ukukhupha i-Brazing Copper Tube kunye ne-Heater Impact
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Ukuchithwa kweBrazil Tube yeCopper
Udidi: Ukukhangela ibhola tags: ubhedu obhedu, ukukhangela ibhonti, isantya esiphezulu sokukhangela ityhubhu yobhedu, ityhubhu ephezulu yokujonga ukukhanya, ukutyumba ubhedu, ukutyunjwa kwebhondi ityhubhu yethusi, umenzi wempahla engeniswayo, ungenisa ukujonga iityhubhu, I-RF ibhadu ityhubhu yethusi
I-Induction Brazing Tube ye-Copper kunye ne-High Frequency RF Equipment Equipment
Ukutshisa i-tube yombane ye-copper in-atmosetric emoyeni kwi-1450 ° F ngaphakathi kwe-45 imizuzwana yebhanki ngaphandle kokuhlanjululwa okanye ukuhlamba i-acid.
Umhlangano webhubhu weCopper, upende weqondo lokushisa, ubumba iifom zangaphambili
I-DW-UHF-10kW Induction Ukufudumeza umbane, isikhululo sobushushu esikude esinezixhobo ezimbini ze-1.25 microfarad capacitors (amandla okwanda kwe-0.625 mfd.) Kunye ne-inductor eyenzelwe ngokukodwa (coil)
Uvavanyo lwenziwa kwi-ABS Mark 2 equkethe umxube we-95% Argon kunye ne-5% yegesi ye-Hydrogen. I-inductor eyenziwe ngokukodwa, eyenziwe ngokukodwa, yayisetyenziselwa ukubonelela ngokufudumala kwindawo edibeneyo yendibano yebhubhu. Emva kokuvavanywa kokuqala kwenziwa ngamacandelo angenanto kunye namapayipi okujonga ukushisa ukuseka amaxesha okushisa kunye nokufudumeza, ukushisa kwe-1450 ° F kwafinyelelwa kumasekhondi angu-45 ukunyibilikisa iifom zangaphambili zebhere.
Iziphumo eziphumeleleyo zaphunyezwe kwi-1450 ° F ngaphakathi kwemizuzwana ye-45. Ekubeni ukushisa okuqhutyelwa ngumbuthano webhubhu, amanyathelo alandelayo kwindibano enye iya kufuna ixesha elingaphantsi. Iintlanganiso zebhondi zethusi zeBrazing isisicelo esihle kakhulu lokutshisa.